Wst-001-2-1-1-1-1-Beeraha Beerta ee Beerta Jardubka Jeebka ah oo lagu dubay Cusub oo loogu talagalay birta birta ee birta ah ee birta ah oo leh qaboojiyaha | Zhongshan Well Sure Metal Product Co., Ltd
Bixintayada dhuxusha, dhuxusha gaaska, waxtarka taxanaha waxsoosaarka korantada.
Steak / pizza sameeye
Ku candhuufta rot / sp cliisiserie
Difaaca miiska miiska
Gaas griddle / Teppanyaki
Alwaax pellet ah
Wst-001-5-1 Iibsashada dusha sare ee dibedda dibedda oo bannaanka u taagan ee xamuulka ah ee xargaha jikada ee birta ah ee birta leh iyo bbq grill
Wst2-cf2 dibedda jikada dibedda kuleylka kuleylka caabbinta caabbinta cagaaran caabbinta cagaaran ee birta ee birta ah ee birta ah ee BBQ BBQ Hargabka jikada
Wst-001-1-1 china china oo soo saare caadada dhalada birta ah ee birta bbq grill ee dibedda ku-meel-gaarka ah
Wst-001-2-2-1-1-1 caadiga ah ee hilibka jikada jikada ee hilibka jikada ah ee lagu dubto oo lagu qurxiyo cusub oo loo yaqaan 'steel basb' birta ee birta leh ee birta ah oo leh qaboojiyaha
Wst-001-2-1-1-1-1-Beeraha Beerta ee Beerta Jardubka Jeebka ah oo lagu dubay Cusub oo loogu talagalay birta birta ee birta ah ee birta ah oo leh qaboojiyaha
1.6 Burburiska, 1 Guudh dhinaca, oo lagu daray 1 gubasho gadaal ah
Isugeynta 900000000000000btu waxay siisaa shaqooyin ah oo ah wax qariban, qiiq, qiiq, dubay, oo isla waqtigaas, oo ay guuleystaan ​​xitaa kuleylka iyo dhadhanka casiir leh
2.Havy waajibka laba-laab ee dhameystiran oo lakabka ah oo lakabka ah kuleylka
Heerkul-ku-dhex-dhexaya ayaa hubiya cabirka heerkulka ee aaga saxda ah ee shidaalka
3. Gubuun dhinaca gubashada
Waxay bixisaa boos dheeri ah iyo goob shaqo
4.Blue-iftiinka isku-haynta iyo nalalka halogen gudaha ah
Waxaad ku raaxeysan kartaa hilibka lagu dubto xitaa habeen madow
5. Si otomaatig ah 360 ° Rotisiserrie
si siman u kululeeya si cuntada aysan u fududayn in la gubo
6.Cabinets oo leh albaabo bir ah oo bir ah
Kaydinta aaladaha BBQ iyo dhalada gaaska cagaaran
Telefoon: +86 760 86337286
Aagga karinta 960 * 455mm
Soosaarka kuleylka 90000000000Tu / 30.5KW
Shidmo gaari piezo iviton
Wax soobashiga dhaqdhaqaaqa 4W (220-240V, AC50hz), 2.5O3R3R / MIN
Dhismo Bir bir ah iyo granite
Fulin hawleed Dhismaha ku dhex dhacay 26.7kw, gubashada dhinaca 3.9kw
Tallaajad 68l, 220-240V / 50hz,
Wax # 304/430 bir bir ah
Muujinta Si fudud u soo ururin, si fudud ayaa loo nadiifin jiray
Isticmaal Jannada / Xisbiga / Dibedda
Qalabka badbaadada Qalabka badbaadada ololka
Dhammaynta Habka Matte
Nooca gaaska Lpg
Shaqayn BBQ, Steak Sameeye, Digaag digaag
Heer kuleyl 350 ℃
Daaqadda Daaqadda Muuqaalka galaaska qaboojiyaha
Gridyada karinta 8mm birta aan birta lahayn, 3pcs
Furan dhalada 1pc
Saxaarad dhibic ah 2pcs, bir aan caadi ahayn
Xukun kulul Xirfadaha leh 180 ° kontorool
Nalalka Laydh-halogen-ka ah 2pcs iyo nalka garaaca 6pcs
Armaajo 2 Saaxiib iyo 3 albaab albaab ah
◪ Eclatal waa soo-saare xirfadle oo soo saaraya BBQ gills / gaaska / foornada foornada / dhuxusha Dhuxul / Dabka sigaarka / godadka sigaarka ama xirmooyinka BBQ.
◪ Waxaan soo bandhignaa labada& Adeegyada ODM, 4-7 maalmood oo shaqo ah oo muunad ah.
◪Waxaan leenahay nidaam maareyn oo tayo leh oo dhammaystiran. Waxaan soo bandhigi karnaa soojeedin ku habboon alaabooyinka& Istaraatiijiyad suuq geyn wanaagsan.
◪ Waxaan haynaa shahaadooyin kala duwan oo ay ka mid yihiin EN1860-1, GS, LFGB, CE, iwm.
◪ Waxaan ku siin karnaa adeegyada ka dib iyo khadka tooska ah, oo waxaan bixin karnaa qiimo miisaaniyadeed si aan ula kulanno dalabkaaga.
1. Maxay soo saari kartaa?
Waxaan soo saari karnaa milix ganacsi, grill-ka ah, gaas, gaas, gaas, grill grill, girxin la qaadan karo, jikada dibedda, pizza-ka iyo steak wax yeel, candhuufta,
2. Miyaad soo saari kartaa iyadoo loo eegayo muunadaha ama sawirrada?
Haa, waxaan soo saari karnaa iyadoo la raacayo shaybaarkaaga ama sawirrada farsamada. Waxaan leenahay r&D Koox ka badan 10 sano oo waayo-aragnimo ah oo ka dhaca aagga BBQ.
3. Waa maxay shuruudahaaga lacag bixinta?
Guud ahaan, waxaan aqbalnaa t / t, dib-u-goynta l / c ee aragtida. Amarada caadiga ah, waxaan ku aqbalnaa t / t 30% dhigaalka leh p.o. dheelitirka in lagu bixiyo ka hor dhoofinta.
4. Waa maxay waqtiga hogaamintaada muunad iyo wax soo saar?
Muunad ah, waxay badanaa qaadataa 7-15 maalmood. Amarka wax soo saarka, waxay badanaa qaadataa 40-45 maalmood ka dib muujinta saamiga oo uu helo lacagta hore. Waqtiga gaarka ah ee gaarsiinta ayaa kuxiran waxyaabaha iyo tirada dalabkaaga.
5. Waa maxay xirmadaada guud ee alaabadaada?
Caadi ahaan waxaan alaabooyinka ku diyaarinaynaa sanduuqa kartoonada ee caadiga ah iyo sanduuqa alwaax. Waxaan sidoo kale xirxiran karnaa sida loogu talagalay baahida macaamiisha.
6. Waa maxay shuruudahaaga gaarsiinta?
Waan aqbalnaa Exw, FOB, CIF, iwm. Waad dooran kartaa midka ugu habboon ama qiimaha ugu habboon adiga.
7. Muddo intee le'eg ayay tahay noloshaada?
3 sano haddii alaabadaadu u isticmaalaan sida saxda ah oo ay si sax ah u kaydiyaan.
8. Muddo intee le'eg ayay damaanad u tahay badeecadaada? Maxaa dhacaya haddii ay jiraan qaybo jaban?
Damaanadkeena waa hal sano. Dammaanad gal ah, qaybaha jabay ayaa si xor ah loogu beddeli karaa.
9. Goormaan heli karaa qiimaha?
24 saac gudahood ka dib markii aad hesho baaritaannadaada la cayimay. Haddii aad deg deg degtid, fadlan noo soo dir emaylka ama farriinta uga tag qabanka ganacsiga, si aan kuugu jawaabi karno waqtiga.
10. Sideen ku heli karaa tusaale si aan u hubiyo tayadaada?
Ka dib markii la xaqiijiyo qiimaha, waxaad u baahan kartaa shaybaar si aad u hubiso tayadayaga. Haddii aad u baahan tahay shaybaar astaantaada, naqshadeyntaada, iwm. Badanaa khidmadda muunaddu waa labanlaab qiimaha qiimaha badan. Soo celinta khidmada muunaddu waxay kuxirantahay tirada si ballaaran. Tirada tirada ayaa go'aamisa in khidmadda muunaddu ay soo laabato ama kaliya soo laabato qeybtii.